တူရကီအတွက်မြို့အားဖြင့်အလုပ်က Metro 2019 နာရီ! | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး01 Adanaတူရကီအတွက်မြို့အားဖြင့်အလုပ်က Metro 2019 နာရီ!
08 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 01 Adana, 06 တူရကီ, 16 Bursa, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 35 Izmir, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ 0
တူရကီ 2019 နာရီအတွက် Metro စီးတီး၏အဆိုအရ!; တူရကီအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အများဆုံးဦးစားပေးနည်းလမ်းများ၏ Metro operating နာရီပြင်းထန်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ တစ်နေ့လျှင်လူရှစ်သန်းကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ကိုအခါအားလျော်စွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ နိုင်ငံသားများ၊ အထူးသဖြင့်အလုပ်နှင့်ကျောင်းမှအိမ်သို့ပြန်လာ Metro သည်မည်သည့်အချိန်ဖွင့်ပြီးမည်သည့်အချိန်ပိတ်သနည်း။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုရှာဖွေခြင်း။ မီးရထားလမ်းတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော Istanbul, Ankara, Izmir, Adana နှင့် Bursa တို့သည်ယနေ့ခေတ်ကာလကိုသိလိုကြသည်။ ဒီတော့ 2019 Metro ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ဤတွင်သင်၏မေးခွန်းများအတွက်အဖြေဖြစ်သည်။
အစ္စတန်ဘူလ်မက်ထရိုမက်ထရိုအဖွင့်နာရီ: 06: 00 - 00: 00
Ankara metro ဖွင့်ချိန်နာရီ: 06: 00 - 01: 00
Izmir metro ဖွင့်ချိန်: 06: 00 - 00: 20
Adana မက်ထရိုဖွင့်ချိန်နာရီ: 06: 04 - 23: 04
Bursa မက်ထရိုဖွင့်ချိန်နာရီ - 06: 00 - 00: 09
Metro တူရကီလူဦးရေရဲ့အသုံးပြုမှုဘယ်မှာဖွင့်လှစ်နာရီအစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 06.00 ဒေသများရှိအာရုံစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို 06.04 တွင် Adana ၌သာဖွင့်နိုင်သည်။
သန်းပေါင်းများစွာသောလူများကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့သယ်ယူပို့ဆောင်သောမက်ထရိုသည်ညအချိန်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ 00.00 တွင်အဆုံးသတ်သည်။ Ankara ရှိ 01.00၊ Izmir ရှိ 00.20, Adana ရှိ 23.04, Bursa ရှိ 00.09 ။
သန်းပေါင်းများစွာသောလူများကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ပြီးယာဉ်အသွားအလာပြproblemsနာများကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလျှော့ချပေးသော Istanbul မက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရိုမက်ထရို။
အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ရထားသည် 8 လှည်းဖြင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင်ခရီးသည်များကိုသယ်ဆောင်သည်။
ဧဝံဂေလိတရားကို Verdi ဝန်ကြီး! .. လေဆိပ်စနစ်နှင့်အတူရထားလမ်းမြို့ကိုချိတ်ဆက်ခံရဖို့ 27 / 01 / 2017 ပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Ahmet Arslan ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမျိုးအစားများသည်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ Atatürkနှင့် Sabiha Gökçenလေဆိပ်နှင့် Istanbul …
Marmaray 2019 အလုပ်အဖွဲ့နာရီ 15 / 01 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ်၏အလုပ်များသောယာဉ်အသွားအလာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ ဦး တည်ရာကိုအလျင်အမြန်ရောက်ရှိလိုသောနိုင်ငံသားများသည် Marmaray ၏အလုပ်ချိန်ကိုကြည့်ပါ။ Marmaray သည်ရထားခရီးစဉ်စနစ်ဖြစ်ပြီး Istanbul တွင်လည်ပတ်သည်။ Bosphorus İstanbulအောက်ရှိ Marmaray
Istanbulkart ပြန်လည်မွမ်းမံစင်တာများနှင့်အလုပ်အဖွဲ့နာရီ 2019 28 / 02 / 2019 istanbulkart သက်တမ်းတိုးခြင်းသည်သင်တို့၏သတင်းများတွင်သင်အလုပ်လုပ်သောအချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိလိုသမျှကိုအဓိကထားသည်။ အဘယ်အချိန်တွင် istanbulkart သက်တမ်းတိုးခြင်းစင်တာများသည်နံနက်ယံ၌ဖွင့ ်၍ ညနေခင်း၌ပိတ်သနည်း။ 2019 … Citizens … Istanbulkart ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးစင်တာများဖွင့်လှစ်သောအချိန်ဖြစ်သည်။
Metro ပြည်နယ်များအားဖြင့်အလုပ်ချိန် 14 / 09 / 2018 မက်ထရိုအလုပ်ချိန် - ပြည်နယ်များအရမြို့ကြီးများရှိယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သောမြေအောက်ရထားများသည်ပြည်သူများကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ မက်ထရိုအလုပ်ချိန်များသည်အများဆုံးဖြစ်သည်
နာရီ operating Uludağနှင်းလျှောစီး LIFT အတွက်တနင်္ဂနွေပြောင်းလဲပြီ 16 / 11 / 2016 တနင်္ဂနွေနာရီ operating Uludağနှင်းလျှောစီး LIFT အတွက်ပြောင်းလဲပြီ: ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင့်သဘာဝတူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများတဦးသည်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းရလဒ်များ၏အလုပ်ချိန် Uludag Bursa Cableway Inc ကို, 176 အခန်းပွနျလညျဖှဲ့စညျးပေး ...
ဧဝံဂေလိတရားကို Verdi ဝန်ကြီး! .. လေဆိပ်စနစ်နှင့်အတူရထားလမ်းမြို့ကိုချိတ်ဆက်ခံရဖို့
Marmaray 2019 အလုပ်အဖွဲ့နာရီ
Istanbulkart ပြန်လည်မွမ်းမံစင်တာများနှင့်အလုပ်အဖွဲ့နာရီ 2019
နာရီ operating Uludağနှင်းလျှောစီး LIFT အတွက်တနင်္ဂနွေပြောင်းလဲပြီ
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro Operating နာရီ
Kahramanmaras စည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားအလုပ်အဖွဲ့နာရီ Changed